Fritzing, dhizaini emagetsi macircuit uye schematics nerutsigiro rweArduino uye Raspberry Pi | Linux Vakapindwa muropa
Fritzing, dhizaini emagetsi macircuit uye schematics nerutsigiro rweArduino uye Raspberry Pi
En Linux iyo zvigadzirwa zvemagetsiIchi chinhu chakaramba chakamira seichi kubva pakutanga kwesisitimu yedu yekushandisa, pamwe nekuda kwekuti, sezvo zvakamuka munzvimbo dzedzidzo, ndivo chaizvo avo vakagadzira mumayunivhesiti nemasangano akapa zvakanyanya. Asi dzimwe nzira dzinogara dzichiuya uye nhasi tinoda kutaura nezvadzo Fritzing, chishandiso chePCB uye schematic dhizaini.
Inopa dhizaini yakakwenenzverwa kwazvo uye kushanda kuri nani, paine mukana wekugadzira dunhu uye kurayira kuti riitumirwe kwatiri rakadhindwa uye rakagadzirira kushandisa, kukero yedu (kunyangwe izvi zvichinyatsoitirwa vashandisi muUS). Asi pamusoro peizvozvo, chokwadi ndechekuti chishandiso chakazara chinotibvumidza kuti tishande nenzira yakarongeka uye neakawanda sarudzo.
Patinoitangisa, tinoona kuti chimiro chayo chinotipa maonero matatu kana modhi dzekushanda: bhodhi (iro rinozivikanwawo sechingwa kana bhodhi rechingwa), dhayagiramu uye pcb. Kunaka kwe Fritzing ndeyekuti nguva dzese tinokwanisa kushanduka pakati pevatatu kuti tione kuti shanduko dzinoratidzwa sei apo isu tiri kushanda pachirongwa chedu, uye zvinhu zvinowedzerwa kwazviri zvinowanikwa kubva kurudyi chikamu chikamu, uko isu tine hombe yakawanda zvidimbu sema LED, resistors, capacitors, transistors, buzzers, kana akasiyana akasanganiswa macircuit.
Fritzing chishandiso cheplatform open source uye nekudaro kurodha pasi hakubhadharwe, kunyangwe isu tichigona kubatana neprojekti inoyemurika uye topa panguva yekudhawunirodha (kana kudzoka tozozviita gare gare kana tawana mashandisiro ayo anogutsa), uye chinhu chakanakisa chainofanira kupa ndeichi nharaunda yakakura, matichawana mapurojekiti uye rubatsiro rwemarudzi ese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Fritzing, dhizaini emagetsi macircuit uye schematics nerutsigiro rweArduino uye Raspberry Pi
Yakanaka kwazvo Fritzing pasina kupokana ndiyo yakanakisa mubazi rayo reLinux Ndinovimba kuti National Instruments kana Proteus vakaisa maziso avo paLinux zvaizovewo zvakanaka ... Kunze kwemazhinji ematunhu edzidziso akagadzirwa muFritzing ... Zvemagetsi zvemunhu wese!
Zvakanakisa! Ndiri kuzozviedza! Chii chaungandikurudzire kuti nditeedzere maseketi edhijitari ane magedhi ane pfungwa?
Inowanikwa kuUbuntu pasina matambudziko kubva kune iyi PPA
Ini ndaizviziva kare kare uye pavakandiratidza iyo ndakafara nekuti ndaitenda kuti ndinogona kugadzira uye TEST zvigadzirwa pamwe arduino.
Asi gare gare ndakazoona kuti vaive "pendi" yekupenda zvigadzirwa, ndinobvuma kuti ndakaodzwa mwoyo nekuti ndaitarisira simulator.
Asi kunyatsoonekwa nekufamba kwenguva, zvinoita kunge chishandiso chakanakisa, asi kuti vanhu havatarise simulation isingaite izvozvo.
EasyEDA suite yemahara, yekuisa-yemahara, yewebhu-yakavakirwa uye yegore-based EDA maturusi ayo anobatanidza ane simba schematic dhizaini, yakavhenganiswa-chiratidzo wedunhu simulator, uye yakadhindwa wedunhu dhizaini mune yakasanganiswa-yepuratifomu browser browser nharaunda kune emagetsi mainjiniya, vadzidzisi, vadzidzi uye hobbyist
Edza EasyEDA Zvino https://easyeda.com/es
Mariela Ayala akadaro
kamera module inogona kuwedzerwa kune Raspberry pi? Ini ndinowana sei module,…. Kubatsira ku
Pindura Mariela Ayala
Ext2Fsd, pinda zvikamu zvako zveLinux kubva paWindows